Johns Hopkins University - Study na USA. Study Abroad Magazine
Johns Hopkins University Nkọwa
tọrọ ntọala : 1876
Echefukwala atụle Johns Hopkins University
Idebanye aha na Johns Hopkins University
Johns Hopkins University bụ a onwe alụmdi na e hiwere na 1876.
Nkuzi ụgwọ na Johns Hopkins University na- $50,000 (Aprox.).
Johns Hopkins University nwere anọ isi campuses na na gburugburu Baltimore. The Homewood Campus, emi odude esote na eclectic obi nke Charles Village, bụ onye bụ isi campus maka undergraduates, na atọ ọzọ campuses n'ụlọ dị iche iche gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ. Hopkins nwekwara atọ ọzọ campuses n'ihi na ya School of Advanced International Studies (AMA) na Washington, D.C.; Bologna, Italy; na Nanjing, China. The Hopkins Blue Jays mpi na NCAA Nkewa III otu narị Conference, ma ha na-eleghị anya kasị mma mara ha anọgide akara ererimbot ke ata ndị mmadụ Lacrosse otu, nke mpi na NCAA Nkewa m asọmpi. Freshmen na sophomores na-chọrọ ibi ndụ na-campus obibi. E nwere sizeable Greek obodo na a otu nke ihe karịrị 1,000 ụmụ akwụkwọ.
Johns Hopkins University na-ekewa itoolu na ụlọ akwụkwọ, ise nke na-eje ozi Undergraduate na gụsịrị akwụkwọ na ụmụ akwụkwọ. Hopkins 'gụsịrị akwụkwọ na mmemme gụnyere n'elu họọrọ Bloomberg School of Public Health na ukwuu họọrọ School of Education,Whiting School of Engineering, School of Medicine, School of Nursing, SAIS na mma-ahuta Peabody Institute for music na egwú. Johns Hopkins Hospital bụ n'elu-họọrọ n'ozuzu ọgwụ na mba, ka ọtụtụ ndị na-specialties họọrọ na n'elu ise. mbụ U.S. president Woodrow Wilson, onye bụbu president nke NAACP Kweisi Mfume na-azụ ahịa na 108 Mayor nke New York Michael Bloomberg nile natara degrees si Hopkins.
Ụlọ akwụkwọ OF elu mba Studies
A nkewa nke Johns Hopkins University kemgbe 1950, SAIS bụ a zuru ụwa ọnụ na alụmdi na awade ụmụ akwụkwọ a n'ezie mba n'ọnọdụ na taa pụrụ iche okwu
Etinyere Classical Laboratory
N'ihi na ihe karịrị 70 afọ, APL, mba kasị ukwuu mahadum mmekọ research center, ka ebu oké egwu nsogbu na usoro injinịa na mwekota, technology nnyocha na mmepe, na analysis.
KRIEGER Ụlọ akwụkwọ nke Arts na sayensị
The Krieger School mmemme na Humanities, Mmadụ sayensị, na-elekọta mmadụ na sayensị na-ma ama maka ha mma na ike, na ọwọrọiso maka dịgasị iche iche nke interdisciplinary ohere ha na-enye
Carey Azụmahịa Ụlọ akwụkwọ
The Carey Business School mepere 2007, iso na Johns Hopkins omenala nke na-eweta otutu azụmahịa management omume mgbe-agbanwe ọrụ
Ụlọ akwụkwọ OF MMUTA
N'ihi na ihe karịrị otu narị afọ, na School of Education-họọrọ No. 1 n'etiti gụsịrị akwụkwọ na mmemme nke mmụta site U.S. News & World Report-enwewo kwadebere nkụzi na-eme ka a dị iche na ndụ nke ụmụaka na ndị okenye
WHITING Ụlọ akwụkwọ nke injinịa
The Whiting School, a ndú ọhụrụ na nnyocha, na-akụzi na ụmụ akwụkwọ na-eche creatively mgbe eru n'elu mgbakọ na mwepụ na nkà mmụta sayensị na ụkpụrụ iji mee ihe siri ike, real-nsogbu ụwa
Nkà Mmụta Ọgwụ
Si ya mmalite, anyị School of Medicine gbanweworo agụmakwụkwọ nke ndị dibịa, omume nke na nkà mmụta ọgwụ, na nchọpụta ọgwụ na mba na mba
Ụlọ akwụkwọ nke ọrụ nọọsụ
A zuru ụwa ọnụ ndú na-enye nwa ara research, mmụta, na mfọn na mgbe nile kwubara n'etiti ndị kasị mma gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ nke nwa ara na mba, dabere na U.S. News &World Report
hiwere na 1857 dị ka America mbụ mmuta nke music, Peabody azụ egwú na dancers nke ọ bụla dị afọ iri na mgbe ọ bụla larịị site ya n'ókè-arịọrọ akụzi ịkụ na ya obodo ndị dabeere na Preparatory
Bloomberg School nke Ọha Health
The Bloomberg School, họọrọ No. 1 na mba site U.S. News & World Reportebe ọ bụ na 1994, a raara nye akụziri ndị ọkà mmụta sayensị na ahụ ike ọha ọkachamara mbọ ka mma nke ahụ ike na mgbochi nke ọrịa na nkwarụ gburugburu ụwa
On ọnwụ ya na 1873, Johns Hopkins, a Quaker entrepreneur na-amụtaghị nwa okokporo, nyere $7 nde (ihe dị ka $140,000,000 taa gbanwee maka n'ji price onu oriri) Fund a ọgwụ na mahadum na Baltimore, Maryland. N'oge ahụ a na uba, eme isi si Baltimore na Ohio ụgbọ okporo ígwè, bụ ndị kasị ibu philanthropic onyinye ihe mere eme nke United States.
Aha mbụ nke philanthropist Johns Hopkins bụ aha nna ukwu ya-nne nne, Margaret Johns, onye lụrụ Gerard Hopkins. Ha aha ya bụ na nwa ha nwoke Johns Hopkins, onye aha ya bụ nwa nke ya ka Samuel Hopkins. Samuel aha ya bụ otu n'ime ụmụ ya mgbe nna ya nakwa na nwa ga-mahadum onye enyemaka. Milton Eisenhower, a mbụ na mahadum president, kwuru n'otu oge na a mgbakọ na Pittsburgh ebe Master nke Ceremoniesintroduced ya ka “president of John Hopkins.” Eisenhower zaghachiri na ọ bụ “obi ụtọ inwe ebe a na Pittburgh.”
The mbụ osisi kpebiri ihe kpamkpam akwụkwọ mahadum nlereanya raara nye na nchọpụta nke ihe ọmụma na ihe elu larịị, inyịme na nke dịkọrọ ndụ Germany. Iwuli na German mmụta nlereanya nke Wilhelm von Humboldt, ọ bịara raara nye research. Johns Hopkins si otú ghọrọ ihe nlereanya nke oge a na-eme nnyocha mahadum United States. Ya ihe ịga nke ọma-emecha gbanwere agụmakwụkwọ ka elu na United States si a na-elekwasị anya ekekpepde kpughere na / ma ọ bụ tinye ihe ọmụma na nkà mmụta sayensị na nchọpụta nke ọhụrụ ihe ọmụma.
n narị afọ nke 20 mahadum outgrew ya ụlọ na trustees malitere ịchọ a obibi ọhụrụ. Emepe emepe Clifton maka mahadum bụ kwa oké ọnụ, na 30 acres (12 o nwere) nke ala na ụlọ a ga-ere ka obodo ahụ dị ka ọha ogige. A ngwọta e enweta site na otu nke ndị a ma ama obodo onye nwetara ala na ụlọ na ugwu Baltimore maara dị ka Homewood. on February 22, 1902, ala nke a na-chie zigara mahadum. The flagship ụlọ, Gilman Hall, e dechara na 1915. The School of Engineering kpọgara na Fall of 1914 na theSchool nke Arts na Sciences soro na 1916. Ndị a ọtụtụ iri afọ hụrụ ceding nke ala site na mahadum maka ọha na eze Wyman Park na Wyman Park Dell na Baltimore Museum nke Art, coalescing na dịkọrọ ndụ nke ebe 140 acres (57 o nwere).
Tupu ya aghọọ isi Johns Hopkins campus, na Homewood ala na ụlọ ahụ na mbụ a na onyinye nke Charles Carroll nke Carrollton, a Maryland planter na signer nkwupụtara nke Independence, nwa-ya Charles Carroll Obere. The mbụ Ọdịdị, na 1801 Homewood House, ka guzo na-eje ozi dị ka ihe na-campus ngosi nka. The brick na marble Federal style of Homewood House ghọrọ ụkpụrụ ụlọ n'ike mmụọ nsọ n'ihi ukwuu nke mahadum campus. Eziokwu a na-akọwa distinctively obodo flavor nke campus ka tụnyere Collegiate Gothic style of ọzọ akụkọ ihe mere eme American mahadum.
na 1909, na mahadum bụ otu n'ime ndị mbụ na-amalite okenye nọgidere na-akụziri na programmụ na na 1916 ọ tọrọ ntọala US’ ụlọ akwụkwọ mbụ nke ọha na eze ahụ ike.
Ebe ọ bụ na 1910s, Johns Hopkins University ka famously kemgbe a “tụụrụ ku n'aka” ka Arthur Lovejoy akụkọ ihe mere eme nke echiche.
Iri ndị mbụ nke narị afọ nke 21 hụrụ mgbasa gafee mahadum elee ma nke anụ ahụ na ndị bi nha. Ichi, a kpara 88-acre mgbasa na ọgwụ campus bụ ọma underway dị ka nke 2013. Dechara ewu na theHomewood campus ka gụnyere a ọhụrụ Biomedical engineeringbuilding, a ọbá akwụkwọ ọhụrụ, a ọhụrụ usoro ndu nku, na ọtụtụ ihe ntaghari ohuru nke flagship Gilman Hall, mgbe mwughachi nke isi abanye mahadum bụ ugbu a underway na-atụ anya ga-agwụ agwụ site na njedebe nke 2014.
Ndị a afọ mekwara ngwa mmepe nke mahadum ọkachamara n'ụlọ akwụkwọ nke mmụta na azụmahịa. site 1999 ruo mgbe 2007, ndị a ọzụzụ e Igbere n'ime School of Professional Studies in Business na Education (SPSBE), onwe ya a reshuffling nke ọtụtụ mbụ n'atụmatụ. The 2007 Kewaa, jikọtara na ọhụrụ ego na-edu ndú, atumatu, emeela ka n'otu oge ntoputa nke Johns Hopkins School of Education na Carey Business School.
Ị chọrọ atụle Johns Hopkins University ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
photos: Johns Hopkins University ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke Johns Hopkins University.